पिसिआरमात्र किन्ने कि, जाँचको दायरा पनि बढाउने? – Health Post Nepal
पिसिआरमात्र किन्ने कि, जाँचको दायरा पनि बढाउने?
२०७७ जेठ २८ गते १०:५१
प्रदेश सरकारले थप चारवटा पिसिआर मेसिन खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको निर्देशक समितिको बैठकले जनकपुर, वीरगंज, राजविराज र रौतहटमा जडान गर्न पिसिआर मेसिन खरिद गर्ने निर्णय गरेको हो।
यसअघि जनकपुर, वीरगंज र राजविराजमा जडान भइसकेपनि थप १/१ र रौतहटमा नयाँ प्रयोगशाला स्थापना गर्ने गरी प्रदेश सरकारले थप चारवटा मेसिन खरिद गर्ने भएको छ। कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउन थप चारवटा पिसिआर मेसिन खरिद गर्न लागिएको सरकारको भनाइ छ।
जनकपुर, वीरगंज र राजविराज गरी अहिले प्रदेश २ को तीन स्थानमा पिसिआरबाट कोरोना परीक्षण भइरहेको छ। जनकपुरमा पछिल्लो पटक जडान गरिएको यो तेस्रो पिसिआर मेसिन हो।
यसअघि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले पठाएको दुईवटा पिसिआरको जाँच गर्ने क्षमता कम रहेको तथा नतिजापनि भरपर्दो नदिएको प्रादेशिक प्रयोगशालाका प्राविधिकहरूले दाबी गरेपछि टाइम पिसिआर मेसिन जडान भएको छ।
पछिल्लो पटक जडान भएको रियल टाइम पिसिआर मेसिनको स्वाब परीक्षण क्षमता दैनिक ९६ रहेको बताइएको छ। तर, मेसिन जडान भएको दुई साता पुग्नै लाग्दा जनकपुर प्रयोगशालाबाट अहिलेसम्म ८२७ जनाको स्वाबमात्र परीक्षण भएको छ।
प्रादेशिक प्रयोगशालाले थप स्वाब संकलन गर्न बन्द गरेको छ। स्वाब परीक्षणको क्षमता दैनिक करिब सयमात्र रहेको तथा चार हजार नमूना परीक्षण हुन क्रममा रहेकोले थप नमूना स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै प्रादेशिक प्रयोगशालाले सूचना प्रकाशन गरेको छ।
‘करिब चार हजार नमूना परीक्षण हुने क्रममा रहेकोले हाललाई थप नमूना स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था नरहेकोले यस प्रयोगशालाको पूर्वस्वीकृतिबिना नमूना नपठाउन अनुरोध गरिन्छ,’ २३ जेठमा प्रयोगशालाका निमित्त निर्देशक रामविनय साहले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ।
‘यस प्रयोगशालामार्फत पठाएका नमूनाहरूको लेबलिङ, प्याकिङ र फारम भर्न त्रुटि भएकोले जेठ २१ र २२ गते पठाइएका नमूना परीक्षणको काम राष्ट्रिय प्रयोगशालाले रोकेको हुँदा विभिन्न पालिकाबाट संकलित नमूना सोझै वा सम्बन्धित जिल्लासँग समन्वय गरी राष्ट्रिय प्रयोगशाला पठाउन अनुरोध गरिन्छ,’ समेत सूचनामा भनिएको छ।
जनकपुरजस्तै रियल टाइम पिसिआर मेसिन सप्तरीको राजविराजमा पनि जडान भएको छ। मेसिन जडान भएर तीन दिनदेखि परीक्षण थालेको छ। तीन दिनमा राजविराजको मेसिनबाट मुश्किलले पचासजनाको नतिजा आएको छ।
राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालका प्रमुख डा.चुमनलाल दास पिसिआर जडान भएपनि परीक्षणको दायराले गति लिन नसकेको बताउँछन्। प्रतिदिन ९६ स्वाब परीक्षण गर्नसक्ने क्षमता रहेको बताइएपनि नयाँ प्रविधि भएकोले परीक्षणले गति लिन समय लाग्ने उनको भनाइ छ।
‘दैनिक दुई शिफ्टमा काम गर्न सकिए परीक्षणले गति लिने देखिइएको छ, तर जनशक्ति अपुग छ,’ दासले भन्छन्,‘क्षमताअनुसार परीक्षण हुनसकेको छैन्।’ ‘परीक्षणको दायरा बढाउन जरुरी देखिएको छ, एक सिफ्टमा काम गर्दा पनि पूर्ण गति दिन सकिएको छैन्, दुई सिफ्टमा काम गर्न त सम्भव नै देखिएको छैन्,’ दासले भने।
प्रदेश २ मा स्वाब संकलन भएको मध्ये ५० प्रतिशत नतिजा अझै आउन बाँकी छ। प्रदेशका सबै जिल्ला गरी मंगलबारसम्म २८ हजार ५३१ जनाको स्वाब संकलन भएकोमा १४ हजार ५४५ जनाको नतिजा आउन अझै बाँकी छ।
प्रदेशस्थित प्रयोगशालाहरूमा जनशक्ति नपिँदा जाँचको दायरा बढ्न नसकेको एक प्राविधिकले बताए। ‘जनकपुर, वीरगंज र राजविराजमा जडान भएका मेसिनको क्षमताअनुसार परीक्षण गर्न सकिए दैनिक करिब तीन सय नतिजा निकाल्न सकिन्छ, तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन्,’ उनी भन्छन्। जाँचको दायरा बढाउन पिसिआर मेसिनका साथै जनशक्ति थप्नतर्फ समेत ध्यान दिन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ।
स्वाब संकलन भइरहँदासमेत परीक्षणको दायरा बढ्न नसकेपछि क्वारेन्टाइनमा तोकिएको १४ दिनको समयभन्दा बढी मानिसहरू बस्नु परेको छ। पिसिआर नतिजा आउन ढिलाइहुँदा कतिपय स्थानमा क्वारेन्टाइनामा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरूमाथि आक्रमण भएको छ भने कतिपय स्थानका क्वारेन्टाइनबाट मानिसहरू भागेका समेत छन्।